Nougat ကိုသင်၏ Huawei P9 Lite တွင်တပ်ဆင်သောအခါတည်ဆောက်ထားသောနံပါတ် Test-keys? ဒီမှာဖြေရှင်းချက်ရှိတယ် Androidsis
သင်၏ Huawei P9 Lite တွင် Nougat ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်တည်ဆောက်မှုနံပါတ်ပေါ်တွင်စမ်းသပ်မှုခလုတ်များ။ ဒီမှာဖြေရှင်းချက်
Francisco Sanchez | | Huawei, Android ဗားရှင်း
သင်ဟာ Huawei P370 Lite ပေါ်ရှိ Android Nougat (နောက်ပိုင်း B9) ကိုမွမ်းမံသောအခါ၊ စမ်းသပ်မှု - သော့၌ကျန်ကြွင်းအရေအတွက်ကိုတည်ဆောက် Huawei ၏ beta testers များမည်သည့်အချိန်တွင်ကြည့်ရှုမည်နည်း။ အကြိမ်များစွာ, အတည်မပြုရသေးသော software ကို install လုပ်သည့်အခါ နောက်ပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်မှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ၊ ၎င်းတွင်ဖြေရှင်းချက်ရှိသည်။
ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးမှာမင်းကိုငါလာသင်တယ် Android Marshmallow သို့သော့ချက်များဖြင့် Android Nougat မှမည်သို့ပြန်ရမည်နည်း Android Nougat ကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ရန်ထပ်မံကြိုးစားရန်မှာမှားယွင်းသောဆော့ဝဲလ်များမှားယွင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
2 အလယ်အထုပ်ကို install လုပ်ပါ
3 Marshmallow တပ်ဆင်ခြင်း (C432)
ဖုန်းအားအနည်းဆုံး ၆၀% အထိအားသွင်းပါစေ။
ငါအရင်ဆောင်းပါးတွေမှာရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် အရန်ကူးထားပါ အောက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်းစက်ရုံသည်ဖုန်းတစ်လုံးလုံးကို restore လုပ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များမှ
အလယ်အထုပ်ကို install လုပ်ပါ
ဒီဖိုင် ကျနော်တို့ကတံတားအဖြစ်အသုံးပြုပါလိမ့်မယ် Marshmallow ကိုထပ်မံတပ်ဆင်ရန်။ သတိရပါ ဒီအပ်ဒိတ်၏တည်ဆောက်အရေအတွက်က C900B300 ဖြစ်သည်.
Nougat အတွက်ဖြစ်ခြင်း, dload ဟုခေါ်သော SD ထဲတွင် folder တစ်ခုကိုဖန်တီးသည်၊ ဖိုင်ကို unzip လုပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသော folder ထဲသို့ထည့်သည်။ နောက်တော့ဖုန်းကိုပိတ်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါ Volume-, Volume ကို + နှင့်ပါဝါ y ဖုန်းကိုအလိုအလျောက်တပ်ဆင်လိမ့်မည်။
terminal စတင်ပြီးတာနဲ့ တည်ဆောက်အရေအတွက်က C900B300 ကြောင်းစစ်ဆေးပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာရန်အတွက်ပုံမှန်အတိုင်းမထိတ်လန့်ပါနှင့်။
Marshmallow တပ်ဆင်ခြင်း (C432)
ငါတို့ download လုပ်တယ် ဤ Marshmallow firmware ကိုငါ ကျနော့်အမြင်မှာတော့ C432B160 ကို install လုပ်မယ် ၎င်းသည်မည်သည့်ပြproblemsနာမျှမပေးသောကြောင့်အခြားသူများကမူဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရပြီးထိုပြhaveနာမရှိသောအခြား Firmware ကိုတပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုသူကိုအတင်းအကျပ်လက်ကိုင်ဖုန်းကပိတ်ထားလိုက်သည်။
SD (dload) ဟုခေါ်သော SD ဖိုင်တွင်ဖိုင်တပုဒ်ကိုဖန်တီးသည်။ ၎င်းကို UPDATE.APP အမည်ရှိသည်အထိ zip ဖြည်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးခဲ့သောဖိုင်တွဲတွင်သိမ်းဆည်းသည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖုန်းကိုပိတ်ပြီးယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သောတူညီသောခလုတ်များဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုစတင်သည် Volume-, Volume ကို + နှင့်ပါဝါ။ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုအလိုအလျောက်စတင်မည်ဖြစ်ပြီးသင်ဆန္ဒရှိပါကနောင်တွင် Android Nougat ကိုတပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Android Marshmallow ရှိလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » သင်၏ Huawei P9 Lite တွင် Nougat ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်တည်ဆောက်မှုနံပါတ်ပေါ်တွင်စမ်းသပ်မှုခလုတ်များ။ ဒီမှာဖြေရှင်းချက်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပထမခြေလှမ်းကိုလုပ်ခဲ့ပြီးစုစည်းမှုသည်မပြောင်းလဲပါ။ စမ်းသပ်ဆဲခလုတ်များဆက်လက်ရှိနေသည်။
ငါ့မှာ P9 Lite VNS L31 ရှိတယ်ငါအမှားလုပ်မိပြီး P9 EVA-09 ရဲ့ update ကိုသွင်းလိုက်တယ်။
အဲဒီကနေကျွန်တော်မအောင်မြင်နိုင်တဲ့အရာဟာစက်ရုံပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း / ရှင်းလင်းစက်ရုံကိုရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါစက်ရုံပြန်လည်စတင်ရန် (sd ရှိ dload folder အတွင်းရှိ p9 lite update နှင့်အတူ) 6% မှာရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အနီရောင် exclamation ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ငါ adb command များ (fastboot all unlock) ကိုသုံးပြီးကြိုးစားရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ remote: command ကိုခွင့်မပြုပါ။
CESAR ABAD RODRIGUEZ SALAS ဟုသူကပြောသည်
ဟိုဆေးလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ငါအဲဒါကိုပြင်လို့မရတော့ဘူးထင်တယ်၊ အဲဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းက Rollback ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်း၊ ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါက ၂ ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အခြားခလုတ်သုံးခုဖြင့်၎င်းတို့ကိုတပ်ဆင်လိုသည့်အခြား roms မ်ားငါမူကား load လုပ်ချင်သောအခါသော့ခတ်ထားသည်ဟုသင်ပြောသကဲ့သို့ Rollback of android2ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ။ ၎င်းသည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်သော့ဖွင့်ပြီး OEM ကိုသော့ခတ်ပြီး android6ကိုတပ်ဆင်ရန် Recovery TWRP ကို ​​install လုပ်ပါ။
CESAR ABAD RODRIGUEZ SALAS အားစာပြန်ပါ
Miguel l ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ Huawei Mate9lite Bl-l23 ရှိသည့်အကူအညီများစွာကို nougat (NRD900M, test keys) သို့မွမ်းမံရန်ကျွန်ုပ်လိုအပ်ပါသည်။ ငါပြန်ဖွင့်တိုင်းအမြဲတမ်းပစ္စည်းကိရိယာပျက်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပီရူးမှဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကောင်းစွာနားမလည်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းကို ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပြပါ။
Miguel l သို့ပြန်သွားရန်
ငါ့ပြproblemနာက cel ကို update လုပ်ပြီး (နှင့်နောက်ဆက်တွဲပါဝါပြတ်တောက်ခြင်း) ပြီးနောက် cilation သည် NRD90M စမ်းသပ်မှုသော့များဖြစ်သည်။ ထိုသို့မကြာခဏဆွဲထားတဲ့။ ငါစက်ရုံမှရရှိခဲ့သောစုစည်းမှုကိုပြန်သွားရန်လိုအပ်သည်။ ငါသိတယ်၊ Hisuite မှ စ၍ ကျွန်ုပ်သည်မူလ ROM ၏“ update.zip.dbk” ​​အရန်တစ်ခုကိုသိမ်းဆည်းထားသော်လည်း၊ HiSuite မှ၎င်းသို့ငါပြန်သွားမရနိုင်ပါ။ အဆိုပါ Hi-suite ကို၏
ဆဲဒီမှာ (Unreleased) အလွန်စိတ်အေးလက်အေး Android ဂိမ်း
Flippy Hill၊ Crossy Road စတိုင်ဂိမ်းမဖြစ်နိုင်သည့်လှည်းလှလှလေးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ